Ahoana no hahafantarana raha voan'ny tazo ny alikako | Tontolo alika
Ny tazo dia famantarana mazava fa miady amin'ny aretina sasany ny alikantsika. Na izany aza, tsy mila fantarintsika fotsiny hoe inona ny maripanan'ny vatany, fa mila mijery ny fihetsik'izy ireo koa isika mba hahafahantsika mahazo antoka tanteraka fa misy zavatra tsy mety amin'ilay alika volo.
Noho ireo antony ireo dia hanazava izahay ahoana no hahalalako raha tazo ny alikako ary inona no azonao atao hanatsarana azy.
1 Fambara soritr'aretin'ny alika
2 Fitsaboana tazo amin'ny alika
Fambara soritr'aretin'ny alika
Fomba iray haingana hahafantarana raha mihasalama ny alikan'ny alikao dia ny fakana ny mari-pana amin'ny alàlan'ny fampidirana thermomètre plastika amin'ny faritry ny faritra misy azy. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy diovinao tsara amin'ny rano ilay zavamaneno, ataovy maina tsara ary asio diloilo kely eo amboniny ary ampahafantaro azy amin'ilay alika. Azo inoana fa tsy tianao na inona na inona, noho izany dia tsara ny torohevitra fa, na dia mandray ny maripanao aza ny olona iray, dia misy iray hafa mitazona azy.
Raha mampiseho 39ºC na mihoatra ny thermométer dia ho fantatrao fa manana tazo ilay biby. Ary azonao atao ny manamarina azy raha toa ka misy ny sasany amin'ireto soritr'aretina ireto: mandoa, mivalana, very ny fahazotoan-komana, malaise, malahelo, orona maina sy / na mafana, mangovitra, orona mikoriana, masiaka, matory.
Fitsaboana tazo amin'ny alika
Raha vao fantatrao fa mararin'ny tazo izy, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby. Betsaka ny aretina, toy ny parvovirus, izay raha tsy voamarika ara-potoana dia mety hahafaty ny alika. Noho izany, alohan'ny hanaovana na inona na inona dia tsara kokoa hatrany ny manadihady azy ny mpitsabo biby, izay hanome azy fitsaboana sahaza ho azy.
Ny fitsaboana dia hisy, arakaraka ny tranga, mba hanomezana antibiotika na, raha malefaka ny raharaha dia asio servieta voahosotra anaty rano mafana ary sarony mandritra ny minitra vitsy ary avy eo maina tsara ary arovy amin'ny hatsiaka.
Ny tazo dia mety ho famantarana ny aretina lehibe. Raha miahiahy ianao fa manana izany dia ento any amin'ny mpitsabo biby.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Ahoana no hahafantarana raha voan'ny tazo ny alikako